Ilay Anarana mampivory (Le Nom qui rassemble)
(Le Nom qui rassemble — Bibles et Publications chrétiennes, 30 rue Châteauvert, 26000 Valence, France)
3 Ny tenan’i Kristy
3.1 Iza no isan’ny tenan’i Kristy?
3.2 Ahoana no fomba fiasan’ny tenan’i Kristy?
4 Ny tranon’Andriamanitra
4.1 araka ny anorenan’ny Tompo azy
4.2 nankinina tamin’ny olona
5 Ny faharavana
5.1 Koa inona izany no hatao?
5.2 Ny foto-kevitra momba ny “sisa tavela”
5.3 Ny foto-kevitra fa izay avy amin’Andriamanitra dia mitoetra hatrany
6 Tafavory ho fiangonana
6.1 Ny fanompoam-panahy (*)
6.2 Ahoana ny fizotran’ny fanompoam-panahy?
6.3 Ny fivoriam-bavaka
6.4 Ny firioriovan-tsaina
6.5 Ny fivoriana fampandrosoana
7 Ny fanompoana sy ny fanomezam-pahasoavana
7.1 Inona no tanjon’io fanompoana io?
7.2 Inona no fanoitran’izany fanompoana izany?
7.3 Inona avy ny fanomezam-pahasoavana nomena?
8 Ny Fanasàn’ny Tompo sy ny Latabany
8.1 Fetin’ny kristiana
8.2 Ny tsangambato fahatsiarovana
8.3 Ny fanambaràna ny nahafatesany
8.4 Ny fanehoana ny maha-iray ny tena
8.5 Ahoana ny fomba fandraisana anjara amin’ny Fanasàn’ny Tompo ?
8.6 Iza no afaka mandray anjara?
8.7 Ny fifehezana (*)
9 Ny vady
Ny taranaka tsirairay dia mila miverina any amin’ny loharano, ho fanasoavany ny tenany, mba hitoerany ao amin’izay zavatra tsy hoe “nampianarina” ihany, fa “nampinoana” koa (2 Timoty 3:14). Tsy hoe mitandrina riba, na manaraka fombafomba izay mazàna nampianarina, fa mifototra amin’ny Tenin’Andriamanitra sy mahay manararaotra ireo asasoratra navelan’ny Tompo ho antsika, tamin’ny alalan’ireo mpanompony, ka manolotra tanteraka ny fo ho an’ilay sarobidy indrindra aminy eto an-tany, dia ny Fiangonana, izay notiaviny sy nanolorany ny ainy.
“Na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako, dia ao afovoany Aho” (Matio 18:20).
“Izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka” (Matio 12:30b).
Anarana mampivory ny navotanao manodidina Anao, na tsy eo aza Ianao (Fihirana).
Jesoa — “Tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra, nomena ny olona, izay hahazoantsika famonjena” (Asan’ny Apostoly 4:12). Tsy misy koa anarana hafa mety ho ivon’ny fivorian’ny olom-boavotra (Matio 18:20).
Rehefa avy nanafaka ny Zanak’i Israely avy tany Egypta Andriamanitra, dia sitrany ny hanangona azy ireo sy hitoetra eo anivony, ao amin’ny tabernakely (Eksodosy 25:8; 29:45-46).
Nony tafiditra tao amin’“ny tany” nomen’Andriamanitra azy izy ireo (Deoteronomia 12), dia tsy maintsy nitady izay toerana hametrahan’i Jehovah ny anarany ny vahoaka. Taonjato maro no nifandimby, vao azo i Jerosalema, ary izay vao natsangana teo amin’ny tendrombohitra Moria ny tempoly. Teo amin’io tendrombohitra io no nanoloran’i Abrahama an’i Isaka, ary teo koa i Davida no nanao fanatitra tamin’ny andron’ny areti-mandringana. Nameno ny tempoly ny rahona (2 Tantara 5:13), tahaka ny namenoany ny tabernakely (Eksodosy 40:34). Taoriana taonjato maro niodinan’ny vahoaka sy nanehoan’Andriamanitra fahari-po, dia niala teo amin’ny tempoly ny voninahitr’i Jehovah (Ezekiela 10. 4, 18 ; 11:23). Indroa rava sy indroa narenina ny tempoly, ary farany, dia potika tanteraka efapolo taona taorian’ny nahafatesan’ny Mpamonjy.
Ankehitriny, tsy trano nataon-tànana intsony no fonenan’Andriamanitra etỳ an-tany, fa ao am-pon’ny olony, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny Efesiana 2:21 dia mampiseho amintsika fa ny mpino dia toy ny trano amboarina, “mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny Tompo”, ary tsy ho vita raha tsy amin’ny fiverenan’ny Tompo. Fa ny andininy faha-22 dia milaza amintsika fa ny mpino amin’izao fotoana izao dia miaraka aorina mba ho “fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy”.
Ny ondrin’i Israely dia voafehy hikambana tamin’ny lalàna sy ny didy: andron’ny “valan’ondry” izany (Jaona 10:1). Nentin’ny Tompo nivoaka avy ao ny ondriny Jiosy (and 3-4), nefa hoy koa Izy hoe: “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho [ireo izay halainy avy amin’ny Jentilisa]; ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry” (and 16). Nanomboka hatreo, izany, tsy rindrina intsony no mampiray ny ondry, fa ivo iray: ilay Mpiandry tokana.
Hitantsika ao amin’ny Asan’ny Apostoly ny olom-bonjena izay nanampin’ny Tompo ho amin’“ny fiangonana” (2:47), “nino ny Tompo” (5:14: ireo izay avy amin’ny Jiosy) ary mbola “ho an’ny Tompo” ihany koa (11:24: ireo izay avy amin’ny Jentilisa), mba hamorona “ny fiangonana” (11:26).
Izao no hitantsika ao amin’ny 1 Korintiana 12:13: “Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo.” Tamin’ny andron’ny Pentekosta no nisian’ny batisan’ny Fanahy Masina; io fiteny io dia tsy ampiasaina afa-tsy tamin’ny niforonan’ny tenan’i Kristy. Nanomboka teo, ireo rehetra nandre ny Filazantsara ka nino, dia “nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina” (Efesiana 1:13). Ny mpino rehetra, izany, dia tonga mandray anjara amin’io batisa io, ary noho ny Fanahy Masina, dia lasa vatana iray. Ny Fanahy Masina, izay Persona, tonga tetỳ an-tany tamin’ny Pentekosta, dia handao izao tontolo izao miaraka amin’ny Fiangonana, amin’ny fiavian’ny Tompo (2 Tesaloniana 2:7). Ny mpino rehetra, izany, nanomboka tamin’ny Pentekosta ka mandra-piverin’ny Tompo, dia isan’ny tenan’i Kristy (Efesiana 1:23). Io voambolana io dia ampiasaina koa, ilazana, na ny olo-masina rehetra etỳ an-tany amina fotoana iray voatondro (Romana 12:5), na ireo olo-masina amina fotoana iray sy toerana iray (1 Korintiana 12:27).
Iray ihany, izany, ny tenan’i Kristy; ny Fanahy Masina no mahatanteraka izany, vokatry ny asan’ny Tompo Jesoa teo amin’ny hazofijaliana. Ny atao dia tsy hoe hamorona indray io firaisana io, fa ny hitandro izany (Efesiana 4:3) sy ny haneho azy. Araka ny 1 Korintiana 10:17, ny fandraisana anjara amin’ny famakiana ny mofo no anehoana ampahibemaso ny maha-iray ny tenan’i Kristy.
Ny Efesiana 4:15-16 sy Kolosiana 2:19 dia mampiseho amintsika fa ny vatana dia miankina tanteraka amin’ny loha: Kristy izay any an-danitra. Avy Aminy no iasan’izay rehetra momba io vatana io, araka izay mety ho anjara asany avy, ka “ny tena… dia mahatonga… ny fitomboan’ny tena.” Ao amin’ny tena, izay “akambana sy ampiraisina tsara” ary “velomina”, dia tsy hisy fitomboana raha tsy manao izay asa nankinina taminy avy ny “isan-tonony” sy “izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjara asany”; raha tsy izany, dia fahalemena sy savorovoro no ho hita.
Tsy misy mifidy ny anjara asany, “fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin’ny tena, araka ny sitrapony” (1 Korintiana 12:18); tiany “mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra”. Misy “fanomezam-pahasoavana” napetraka ao amin’ny fiangonana, fa misy koa andraikitra samihafa: fifanampiana, fitondrana, fanompoana, fizaràna, fiantrana.
Ny voalohany sady mateti-pitranga indrindra, dia ny tsy fahafantarana na tsy fanatanterahana ny asa nankinin’ny Tompo taminao. Matory ianao, tsy miraharaha izay hahasoa ny fiangonan’Andriamanitra; tsy misy fanazaran-tena, na mba hahafantarana hoe inona ny fanomezam-pahasoavana mety nomen’ny Tompo anao, na mba haniriana fatratra fanomezam-pahasoavana lehibebe kokoa (1 Korintiana 12:31). Fatiantoka izany, na ho anao na ho an’ny rehetra!
Ny loza faharoa dia ny fialonana (1 Korintiana 12:15-17): tsy dia misy lanjany ny asa ankinina amiko; aleoko ny anjara asan’olon-kafa, izay mba manaitra kokoa!
Ny loza fahatelo dia ny fihamboana amin’ny asa nankinina taminao, hany ka tonga manao tsinontsinona ireo osa ianao (1 Korintiana 12:21-23): ny fanomezam-pahasoavana noraisiko ihany no misy lanjany, tsy mila ny hafa aho. Ary loza mateti-pitranga io, fa tsy araka ny ieritreretana azy! Hadinontsika ve ny fananarana ao amin’ny 1 Korintiana 4:7, hoe: “Inona no anananao, izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehareha ohatra ny tsy nandray?”
Fa nahoana ny Fanahin’Andriamanitra no nametraka ny 1 Korintiana 13 ho ao anelanelan’ny toko faha-12, izay miresaka ny tena sy ny rantsambatana ao aminy, sy ny toko faha-14, izay manazava ny fomba fiasan’ny fiangonana? Satria tsy misy zavatra afa-mandroso raha tsy eo ny fitiavana. Izany no lazain’ny Efesiana 4:15-16 hoe: “hanaraka ny marina amin’ny fitiavana … hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana”. Tsy ny fitiavana tadiavina any amin’ny hafa; tsy ny fitiavana izay lazaina fa tsy hita ao amin’ny fivoriana eo an-toerana; fa ny fitiavan’ny Tompo, izay efa mameno antsika ka manosika antsika ho tia, “satria Izy dia efa tia antsika taloha”; fa raha tsy misy io fitiavana io, “dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho… Tsinontsinona aho… Tsy mahasoa ahy akory izany.” Fitiavana, izay “lehibe indrindra” eto amin’izao tontolo izao; fitiavana “tsy ho levona mandrakizay”.
1 Petera 2:4-7
Kisarisarin’izany ireo takelakazo atao amin’ireo ilan’ny tabernakely: nalaina tsirairay tamina hazo maniry etỳ an-tany izy ireo, narafitra, norakofana volamena, natsangana teo ambony fanambaniny volafotsy (Eksodosy 26:15-30; 36:20-34). Toy izany ny olo-navotana, notsoahina avy amin’izao tontolo izao, nosalorana ny fahamarinan’Andriamanitra ao amin’i Kristy, naorina tamin’ny fanavotana. Raha takelakazo iray monja, nefa, tsy ho afaka nitsangana; tsy maintsy nakambana ho iray ireo, vao nahavita ny tabernakely, izay lasa Tranon’Andriamanitra.
Ary ankehitriny, dia hoy ny Soratra Masina amintsika: ianareo koa, dia toy ny vato velona, “atsangana ho trano fanahy”. Io trano fanahy io no “fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy” etỳ an-tany, amina fotoana iray voafaritra, ary koa “tempoly masina ao amin’ny Tompo”, izay mitombo tsara mandra-pahavitany ary mandra-pakan’ny Tompo azy ho eo akaikiny. (Efesiana 2:21-22).
Hoy Izy ao amin’ny Matio 16: “Haoriko ny fiangonako.” Izy, izany, no te hanorina azy; saingy mbola ho avy izany; ao amin’ny Asan’ny Apostoly toko faha-2 vao hitantsika ny fiorenany. Izy tenany no vatolampy iorenan’izany trano izany (Matio 16:18), vato fehizoro (Efesiana 2:20). Mandritra ny vanim-potoana mifandimby, dia manampy vato velona apetraka tsirairay amin’izany Izy, mandra-pahavita ny asany, ka ho tonga tanàna masina ny Fiangonana, ilay tanàna hitantsika mamirapiratra ao amin’ny faran’ny bokin’ny Apokalypsy.
Hazavain’ny 1 Korintiana 3:9-17 amintsika izany.
Nahoana moa io trano tena tsara fototra sy tsara rafitra teo aloha io, no lasa rava ka maneho fisavorovoroana toy izao ankehitriny izao? “Fahavalo no nanao izany … raha mbola natory ny olona” (Matio 13:25, 28)
Ny Tompo dia efa nilaza izany mialoha, indrindra ao amin’ireo fanoharana nataony ao amin’ny Matio 13. Ny fanoharana momba ny tsimparifary dia manazava amintsika ny fifangaroan’ny zanaky ny fanjakana amin’ny zanak’ilay ratsy; ny voantsinapy dia milaza ny fitomboana tsy ara-dalàna nahatonga azy ho hazo ngezabe manalokaloka ny ratsy ao anaty rantsany; ny lalivay kosa dia manambara fa ny fatra telon’ny koba —mampahatsiahy ny fahalavorariana sy ny fahadiovan’ny Tompo mbamin’izay rehetra mifamatotra aminy— dia nosimbain’ny masirasira kely fotsiny nentin’ireo fampianaran-diso, hany ka simba ny koba manontolo. Ny 1 Korintiana 5:6 dia mampiseho amintsika ny loza ateraky ny lalivay (ny “masirasira”), dia ny faharatsiana ara-moraly amin’ny fitondrantenan’ireo antsoina hoe “rahalahy”; io voambolana “masirasira” io koa no ampiasaina ao amin’ny Galatiana 5:9, ilazana ireo fampianaran-diso mampivarilavo ny olona hiala amin’ny fahasoavana.
Efa nambaran’ireo Apostoly mialoha koa io faharavana io. Nolazain’i Paoly ny momba ireo “amboadia” ho tafiditra ao amin’ny loholon’ny Efesiana, ka tsy hiantra ny andian’ondry; olona avy amin’izy ireo ihany, hitsangana “hitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy”. Epistily maro, toy ny epistily faharoa ho an’i Timoty, ny epistily faharoa nosoratan’i Petera, ireo epistily nosoratan’i Joda sy nosoratan’i Jaona, no mamelatra amintsika io faharatsiana izay tsy hitsaha-mitombo io. Ary ny epistily ho an’ny fiangonana fito ao amin’ny Apokalypsy 2 sy 3, dia mampiseho fa taorian’ny nialan’ny fiangonana tamin’ny fitiavany voalohany, dia vao mainka nanalavitra ny Tompo izy ka tonga toy ny tao Laodikia, izay tsy nanome toerana ho Azy intsony! (Apokalypsy 3:20).
Nefa tokony hatoky tanteraka koa isika fa mitoetra hatrany izay efa nataon’i Kristy: “Ny vavahadin’ny fiainan-tsy hita, tsy haharesy azy.” Tokony havahana tsara, izany, izay rava: ny tranon’Andriamanitra, izay nankinina ho andraikitry ny olona ny fanorenana azy; sy izay mitoetra: ny tenan’i Kristy, ny vadin’ny Zanak’ondry, ny fampanantenana ny fanatrehan’ny Tompo eo afovoan’ny roa na ny telo miangona amin’ny anarany (Matio 18:20).
Tokony hitoetra ho irery ve? Misy ireo voasinton’izany foto-kevitra izany. Hoy i J. N. Darby indray mandeha: Mora kokoa ny mandeha irery, toy izay mandray anjara amin’ny zavatra mampalahelo ataon’ny Eglizin’Andriamanitra etỳ an-tany! Nefa tsy ny hanangona ny olony ve no fanirian’ny Tompo? Amin’alahelo lehibe tokoa no nilazany ao amin’ny Jaona 16:32 hoe: “Indro, avy ny andro … izay hielezanareo samy ho any amin’ny azy avy.” Nefa toy inona ny hafaliany, tonga teo afovoan’ireo mpianany, ny harivan’ny nitsanganany tamin’ny maty, nampiseho azy ireo ny tànany sy ny lanivoany! “Dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo.”
ny foto-kevitra momba ny “sisa tavela”;
ny foto-kevitra fa izay avy amin’Andriamanitra dia mitoetra hatrany.
Nony nanao ilay ombilahy kely volamena i Israely, dia tokony ho nandringana ny vahoaka ny fahamarinan’Andriamanitra. Nanaiky ny fifonan’i Mosesy nefa Izy, ka tsy nanao izany. “Naka ny lay (i Mosesy) ka nanorina azy eo ivelan’ny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe “ny trano lay fihaonana”. Ary izay rehetra nitady an’i Jehovah dia nivoaka ho eny amin’ny trano lay fihaonana, izay teo ivelan’ny toby” (Eksodosy 33:7). Ny ankabeazan’ny vahoaka dia tsy nivoaka; avy eo am-baravaran’ny lainy avy izy ireo no nanara-maso an’i Mosesy mankeny amin’ny lay fihaonana (and 8); fa nisy kosa vitsivitsy, tena nivoaka teo ivelan’ny toby tokoa (and 7): ireo no sisa tavela, nifikitra tamin’Andriamaniny.
Foto-kevitra mitovy amin’izany ihany no hitantsika koa ao amin’ny Malakia 3:16. Taonjato iray no lasa, taorian’ny fiverenana avy tany amin’ny fahababoana; tamin’ireo nihoby fahiny tamin’ny nananganana ny tempoly indray, dia vitsy sisa, teo anivon’ny daholobe izay niodina tamin’Andriamanitra, no “natahotra an’i Jehovah ary samy niresaka tamin’ny namany avy”; ireo dia sisa tavela nahatsiaro ny Anarany, ary noho izy ireo, dia “nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana.”
Mbola io foto-kevitra io ihany koa no hitantsika ao amin’ny 2 Timoty 2:17-22. Maro ny miady teny, nefa tsy mahasoa akory izany, fa “mamadika ny mpihaino”. Nisy ny “fibedibedena foana”: ireo izay nanao izany dia mbola handroso amin’ny haratsiam-panahy ihany; hikiky toy ny homa-miadana ny tenin’ireo. Nasongadina manokana ny trangam-pampianaran-diso, ohatra tamin’ireny ry Hymeneo sy Fileto. Nisy ny nihaino azy ireo, ary nivadika ny finoany. Andraikitra lehibe izany, ho an’ireo izay nampiana-diso, fa andraikitra ihany koa ho an’ireo izay nihaino azy ireo. Inona no azo atao, manoloana izany?
Raha ny tena izy, ny olom-boavotra rehetra dia ao amin’ny tenan’i Kristy, ary tsy afaka hivory raha tsy isan’io tena io, fa tsy hoe satria manaiky foto-kevitra sasantsasany ao na foto-kevitra azo iombonana. Rehefa “nivoaka hankeo Aminy eo ivelan’ny toby”, dia “mivory satria Izy no nampiray antsika.” Ny famakiana ny mofo no anehoan’io fivoriana io ny maha-iray ny tena, araka ny 1 Korintiana 10:17; esoriny ny lamina rehetra ataon’olombelona sy izay fikambanana miorina amina fototra hafa; tafiditra ao anatiny ny mpino rehetra, ary misokatra ho an’ny mpino rehetra izy, satria isan’ny tenan’i Kristy ireo; raisiny avokoa ireo isan’ny tenan’i Kristy izay mitady ny hivory manodidina ny Tompo Jesoa noho izany maha isan’ny tenan’i Kristy azy izany, mitondra ny foto-pampianaran’i Kristy tsy voalotona fampianaran-diso na miray amin’ireo, ary mandeha amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra.
Na oviana na oviana, tsy tokony ho toy ny fifandraisantsika amin’ny olon’izao tontolo izao ny fifandraisantsika amin’ny tena zanak’Andriamanitra mandeha am-patahorana Azy, na dia tsy afaka miara-mivory aminy manodidina ny Tompo aza isika, noho ny foto-kevitra toaviny. Ny tsy mpino dia antsoin’ny Tenin’Andriamanitra hoe “zanaky ny devoly” (1 Jaona 3:10), “olon-ko azy amin’ny fiainan’Andriamanitra” (Efesiana 4:18), ka na inona na inona antony, dia tsy afaka ny hiray “zioga tsy antonona” amin’izy ireo isika.
Raha efa ao anatina fivoriana tahaka izany, noho ny fahasoavan’Andriamanitra, dia aoka hankasitraka, na dia eo aza ny fahalemena rehetra sy ny fisavorovoroana mety hiseho ao. Tokony hiezaka, omban’ny fiankinana tanteraka amin’ny Tompo sy ny fifanekena amin’ny fatahorana an’i Kristy (Efesiana 5:21), ny ho fitaovana mitondra ny tsara, manampy, mampiorina, mankahery (Romana 14:19), ho fanaka “mahasoa ho an’ny Tompo, voavoatra ho amin’ny asa tsara rehetra” (2 Timoty 2:21). “Mihazona ny Loha” (Kolosiana 2:19), ny Ivo: izany no hiaro antsika tsy hiraviravy tànana sy tsy hiavonavona.
manolotra: io no fanompoam-panahy
mangataka: ny vavaka izany
mandray: ny fampiorenana
Misy fivoriana hafa, amina fotoana tsy voafaritra na fotoana voafetra ihany, tsy manana io endrika fivoriam-piangonana io: ny sekoly alahady, fihaonana ho an’ny tanora, fivoriana itoriana ny filazantsara ataona evanjelista nomen’ny Tompo fahasoavana manokana ho amin’izany. Arakaraka ny zava-misy, ny fivoriana hafa dia hanana endrika fivoriam-piangonana na tsia, ohatra ny mariazy, na ny fampianarana ny fiangonana araka ny Asan’ny Apostoly 11:26, na koa fampahafantarana ny fiangonana ny fandroson’ny asan’ny Tompo any an-tany lavitra, toy ny ao amin’ny Asan’ny Apostoly 14:27 sy 15. 7, 12.
(*) Tsara hodinihina, momba ity lohahevitra manan-danja ity, ny bokikely: “Le culte selon la Parole”, J. N. Darby. Ny “fanompoam-panahy” lazaina eto dia ilay antsointsika mahazatra hoe “fanompoam-pivavahana”. Misy nefa ny maha-samy hafa azy ireo (fanamarihan’ny mpandika).
Jaona 4:23-24; 1 Petera 2:5; Hebreo 13:13-16; Filipiana 3:3
Io no fanompoana avo indrindra ataon’ny kristiana etỳ an-tany; mamaly ny fanirian’ny Ray mitady mpivavaka Aminy izany (Jaona 4:23); ny Tompo mihitsy, tamin’ny nitsanganany tamin’ny maty, no nanomboka izany antsam-piderana izany (Salamo 22:22); amin’ny alalan’ny Fanahin’Andriamanitra ihany no ahazoantsika manao izany fanompoana izany (Filipiana 3:3).
“Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy, tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana” (Jaona 4:24). Ny 1 Petera, indray, dia milaza ny “fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy” (1 Petera 2:5). Ary ny Hebreo 13:15 dia manipika ny “vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany”.
Nefa mety hisy koa, fotoam-panginana mandritra ny fanompoam-piderana: “Ho Anao ny fanginana sy ny fiderana, Andriamanitra any Ziona ô!” (Salamo 65:1). Tamin’ny namakian’i Maria ny tavoarany, dia tsy nisy fitenenana, fa “fenon’ny hanitry ny menaka ny trano” (Jaona 12:3)
Ny asa fanasoavana koa dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanompoam-panahy. Hoy ny Hebreo 13:16: “Fa fanatitra toy izany no sitrak’Andriamanitra”; izany dia mampahatsiahy ny Deoteronomia 26:12-13, izay mametraka eo anoloan’ny fon’ny Israelita tonga hanatitra ny voaloham-bokatra, ny filàn’ireo mpanompon’Andriamanitra, mbamin’ny an’ny kamboty sy ny an’ny mpitondratena ary ny an’ny vahiny.
Tsy handray fitahiana na hanovo hery no ahatongavana ao amin’ny fanompoam-panahy; indrindra, moa, tsy hoe hahazo famelan-keloka; fa satria efa nahazo izany rehetra izany isika, dia tsara raha maneho fankasitrahana noho izany. Tsy tanteraka ny tena fanompoam-panahy, raha tsy efa mihavana amin’Andriamanitra, miditra ao amin’ny fitoerana masina indrindra “amin’ny fatokiana be avy amin’ny finoana” (Hebreo 10:22).
Ny mpino rehetra dia samy mpisorona avokoa; koa tena tsara indrindra, izany, raha mba rahalahy maromaro no maneho ny fiderana —amin’ny alàlan’ny hira sy ny vavaka—, fa tsy hatokana ho an’olona roa na telo izany. Ary raha tsapantsika lalina fa tsy ampy ny fiderana ataontsika, dia tadidio fa ireo dia atolotra ho an’Andriamanitra “amin’ny alàlan’i Jesoa Kristy” (1 Petera 2:5), ilay Mpisorona lehibe (Hebreo 10:21); noho Izy, dia ankasitrahina ireny (jereo Eksodosy 28:36-38).
“Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin’ny tany, na amin’inona na amin’inona, ka hangataka izany, dia ho azony avy amin’ny Raiko izay any an-danitra izany” (Matio 18:19).
Ireo izay mivavaka dia “mifanaiky”. Tsy hoe fifanekena efa natao mialoha nefa izany; tsy hoe “nanao fifanekena” izy ireo; fa ny Fanahy Masina no mamboatra io fifanekena io ao amin’izy ireo, ary izay manonona ny vavaka dia tsy manao afa-tsy ny maneho izany. Hitantsika, amin’izany, fa ratsy ny vavaka maneho fisaraham-bazana eo amin’ny mpirahalahy, ary miafara amin’ny fitsarana voalaza ao amin’ny Jakoba 5:9 izany.
Toy ny amin’ny fanompoam-panahy ihany, dia ilaina ny mivavaka “ao amin’ny Fanahy Masina” (Joda 20). Ho fohy ny vavaka atao, “zavatra iray” no hangatahina (Matio 18:19), ary fadiana ny manao lisitra lavareny satria, araka ny efa voalaza, dia “mampiraviravy tànana” ireo izay mbola te hivavaka amin’ny fo izany! Tsy natao hamelabelarana fahamarinana amin’Andriamanitra ny vavaka atao ao am-piangonana. Marina fa azo tsahivina ny fampanantenana na fampianaran’ny Soratra Masina, fototr’ireo zavatra tadiavina; fa zavatra tena hafa izany. Ary farany, tsy ny zavatra mikasika ny tena manokana no holazaina, fa ny an’ny fiangonana na ny an’ny mpiangona, ny asan’ny Tompo etỳ an-tany, ny fanahy izay very; raha fintinina, dia ireo zavatra marobe irin’ny fiangonana hoentina eo amin’ny Tompo, amin’ny alàlan’ilay manonona ny vavaka.
Ampiana koa fa ny olona rehetra —na rahalahy na anabavy— dia tsy hoe afaka ihany, fa tokony hamarana ny vavaka amin’ny “amen” (*), raha tsy hoe angaha tsy fantatra mihitsy izay zavatra nolazaina (1 Korintiana 14:16) na tena diso toerana. Tsy tokony hatao an-tsaina fotsiny ny amen, fa tokony hotononina.
(*) Amen dia midika hoe : marina tokoa. Izany no fomba ilazana ny fanekena ny teny notononin’ny hafa.
Ny momba ireo zava-manahirana antsika, ireo olana eo amintsika, dia “aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra, amin’ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan’Andriamanitra ... hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo, ao amin’i Kristy Jesoa” (Filipiana 4:6-7). Fampanantenana sarobidy izany, tokony horaisintsika, ary tokony hampiharintsika ny fampirisihana raketiny.
Ny zavatra rehetra atao dia tokony “ho fampandrosoana”; famakiana ampahibemaso ny Tenin’Andriamanitra (1 Timoty 4:13), fampirisihana sy fampiononana avy amin’izany; ny hira koa dia afaka mampandroso (Kolosiana 3:16), toy ny vavaka (1 Korintiana 14:15).
Zava-dehibe ihany koa ny mahatsiaro fa izay miteny dia miteny “toy ny milaza tenin’Andriamanitra” (1 Petera 4:11). Andraikitra mavesa-danja ho azy, nefa koa andraikitra ho an’izay mihaino!
“Aza mamono ny Fanahy”, hoy ny apostoly tamin’ny Tesaloniana (1 Tesaloniana 5:19). Mety hitranga izany, raha mandray fitenenana amin’ny tsy tokony ho izy, na koa tsy miteny nefa atosiky ny Fanahy. Fa ny azo antoka hoe sakana lehibe indrindra amin’ny fiasa malalaky ny Fanahy, ao amin’ny fivoriana, dia ny fanakianana matetika loatra ataon’ny mpivory, ilay toe-tsaina malaky mitsikera. Ary fanamarihina iray, na dia mitombina tanteraka aza, nefa atao tsy am-pandanjalanjana na tsy am-pitiavana, dia afaka mamono ny Fanahy koa.
Vakio : 1 Korintiana 12; Efesiana 4:7-16; Romana 12:4-8; 1 Petera 4:10-11.
Tsy safidin’ny olona, izany, na dia rahalahy malaza aza izy, tsy safidina vondron’olona, na safidina fiangonana ao an-toerana iray aza, no hiantso olona hampianatra ny Tenin’Andriamanitra na hanao asa fanompoana hafa, fa Andriamanitra no manome ny fanomezam-pahasoavana “araka ny sitrapony”, “araka izay tiany”. Tsy misy, izany, na fanomezam-pahefana, na fanokanana, na fifandimbiasana. Ny fiangonana no manolotra “ny tànana ankavanan’ny fihavanana” (Galatiana 2:9) ho an’izay nahazo izany fanomezam-pahasoavana izany; hanaiky ny zavatra nataon’Andriamanitra izy, fa tsy hanome na inona na inona.
Ao amin’ny Efesiana 4:12-16 ny valin’izany:
“ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin’ny asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana, ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy” (and 12). Ny tanjona voalohany amin’ny fanompoana, izany, dia ny fampandrosoana, ny fananganana ilay trano nankinin’ny Tompo tamin’ny olony: ny evanjelista, manao ny asa fanompoany, dia hitondra olona avy amin’izao tontolo izao ka ho ao amin’ny fiangonana, noho ny fahasoavan’ny Tompo; toy ilay Samaritana nahita naratra teo amoron-dàlana, nangoraka azy, nitsabo azy, nampitaingina azy teo amin’ny bibiny ary nitondra azy ho any amin’ny tranom-bahiny. Tao, dia nankininy tamin’ilay tompon’ny tranom-bahiny ny fikarakarana azy, kisarisarin’ny Fanahy Masina miasa amin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavana mpaminany, mpiandry ary mpampianatra ao amin’ny fiangonana, ho fanatanterahana sy ho fampandrosoana.
“Mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ny firaisan’ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak’Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe” (and 13). Fitomboana, izany, no tanjona. Ny zaza bodo ao amin’i Kristy, izay vao “nateraka indray”, dia efa manana ao Aminy izay rehetra ho azy mandrakizay; nefa tsy fantany na ny toerana misy ny tenany na ny lovany. Ny tanjon’ny fanompoana, izany, dia ny hampahalehibe azy, mba ho tonga lehilahy lehibe izy sy izay rehetra toa azy: ho lasa mpino mahatsapa marina ny toerany ao amin’i Kristy, ka matoky sy misitraka izany. (“Ianareo ato Amiko, ary Izaho ao aminareo!”)
“Mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra” (and 14). Izay tsy miorina ao amin’ny fahamarinana sy tsy nianatra nanavaka ny tsara amin’ny ratsy, dia mora verezin’ny fitaritan-tsaina samihafa. Noho izany, andaniny, ilaina ny fanompoana, mba hampiorina ao amin’ny fahamarinana, ary ankilany, mety hampidi-doza, indrindra ho an’ireo tanora, ny mamaky na mihaino fampianarana tsy azo antoka mialoha hoe araka ny fihevitry ny Tompo. Mora mihitsy ny hidiran’ny eritreritra hafa ao an-tsaina, ary mitombo ao izany, ka “mamery amina làlana miolikolika”, an-kafetsena.
“Fa mba hanaraka ny marina amin’ny fitiavana, ka hitombo amin’ny zavatra rehetra ho amin’Izay Loha, dia i Kristy” (and 15). Io no tanjona avo indrindra, amin’ny fanompoana: “ho amin’Izay Loha, dia i Kristy”. “Mba hahalala Azy”, hoy ny apostoly. Ny Tenan’ny Tompo no ambonin’ny sakafo sy ny fampandrosoana, ambonin’ny fiorenana ao amin’ny fahamarinana, ambonin’ny fahalalana. Tsy afaka hitombo hahatratra ny ohatr’i Kristy, raha tsy marina amin’ny fitiavana, fitiavana Azy sy ny olony.
Ny 1 Korintiana 13, izay tsara fipetraka anelanelan’ny 1 Korintiana 12 sy 1 Korintiana 14, no manoro antsika ny tsiambaratelon’izany: ny fitiavana. Ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra, raha tsy misy fitiavana, dia kipantsona maneno ihany, tsinontsinona ary tsy mitondra na inona na inona. Ny fanoitra iray hafa koa, dia ny voninahitr’Andriamanitra, araka ny teny ao amin’ny 1 Petera 4:11 hoe: “mba hankalazana an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra, amin’ny alalan’i Jesoa Kristy”.
“Samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan’i Kristy avy isika rehetra”, hoy ny Efesiana 4:7. Miditra an-tsipiriany kokoa ny 1 Korintiana 12:7, amin’ny hoe: “Izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny Fanahy, hahasoa.” Noho izany, ny olona rehetra isan’ny tenan’i Kristy dia samy nahazo zavatra tsirairay, avy amin’ny Tompo, izay tokony hampiasaina ho an’ny hafa (1 Petera 4:10) mba “hahasoa” (1 Korintiana 12:7). Ny fanomezam-pahasoavana noraisina dia mitarika andraikitra mba hanekena io fahasoavana io, nefa kosa tokony hotsaroana lalandava fa tsy misy avy amintsika: “Inona no anananao, izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehareha?” (1 Korintiana 4:7).
ny apostoly sy ny mpaminany (1 Korintiana 12:28, Efesiana 4:11), izay nametraka ny fototra (Efesiana 2:20). Tsy misy intsony ny fanomezam-pahasoavana ifotony ho apostoly, nefa mbola miasa eo anivontsika ihany izy ireo, amin’ny alalan’ny soratra avy tamin’ny tsindrimandry, izay navelany ho antsika. Tsy misy ny fifandimbiasan’ny apostoly, tsy misy milaza izany, ao amin’ny Soratra Masina.
Ny evanjelista, ny mpiandry sy ny mpampianatra dia mbola manohy hatrany ny asa fanompoany, ankehitriny. Ny evanjelista, mba hitaona ny olona; ny mpiandry sy ny mpampianatra —ary koa ny mpaminany, izay miteny amin’olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana, araka ny lazain’ny 1 Korintiana 14:3—, mba hampiorina ny olo-masina, mba hiteny amin’ny fon’izy ireo sy amin’ny eritreriny ary amin’ny sainy.
Voalaza koa, fanomezam-pahasoavana miaraka amin’ny famantarana: fahagagana, fiteny amin’ny teny tsy fantatra, fanomezam-pahasoavana hoenti-manasitrana; ny tena tanjon’izy ireny, tany am-boalohany, dia ny hanamarinana ny finoana kristiana, araka ny Marka 16:20: “ary ny Tompo … nanamarina ny teny, tamin’ny famantarana izay nomba azy.” Azo eritreretina fa mety mbola ho hita izany fanomezam-pahasoavana izany, mandritra ny fitoriana ny teny any amin’ireo tany mbola manompo sampy, mila ny “fanamarinana” ny filazantsara, amin’ny voalohany; fa ny amin’ny fitenenana amin’ny teny tsy fantatra kosa, dia voalaza mazava fa “hitsahatra” ireny. Etsy an-daniny koa, ny faminaniana sy ny fahalalana dia “ho levona” (rehefa miverina i Kristy, araka ny lazain’ny andininy manaraka) (1 Korintiana 13:8-13).
Misy koa ny fanomezam-pahasoavana samihafa, izay tsy voatery hiaraka amin’ny fanomezam-pahasoavana ifotony: ny tenim-pahendrena, ny tenim-pahalalana, ny finoana, ny fahaiza-manavaka, araka ny 1 Korintiana 12:8-10. Tsy ho hadino ny ao amin’ny Romana 12:8, dia ny mananatra, ny manome, ny mitarika, ny miantra.
Fanetrentena diso toerana ny mieritreritra hoe tsy tokony hitady ireny fanomezam-pahasoavana ireny. Mazava nefa ny lazain’ny Teny hoe: ”Maniria fatratra ny zava-panahy” (1 Korintiana 14:1). Tsara, izany —ary araka an’Andriamanitra—, ny mitondra izany am-bavaka, ka ho tonga hahatakatra izay ankinin’ny Tompo amintsika, noho ny fianteherana aminy.
Mety hisy koa, fanomezam-pahasoavana noraisina, nefa navela hihamalemy, na ho faty mihitsy aza, satria tsy nampiasaina. Izay no mahatonga ny 2 Timoty 1:6 hilaza hoe: “Mampahatsiaro anao aho, mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra, izay ao anatinao.”
Misy aza —ary matetika kokoa, tsy araka ny hanampoizana azy— ny mety ho tonga amin’ny tsy firaharahana mihitsy izany fanomezam-pahasoavana noraisina izany. Akory angamba ny hagagan’i Arkipo, tamin’ny namakiana voalohany tao am-piangonana ny epistily ho an’ny Kolosiana, raha nandre tampoka izy, taorian’ireo fiarahabana isan-karazany, hoe: “Lazao amin’i Arkipo hoe tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin’ny Tompo, mba hahatanterahanao izany!” (Kolosiana 4:17). Tadidin’ny zanak’i Filemona (?) angamba izany.
Farany, aoka hotsaroantsika ny Tenin’Andriamanitra mampirisika antsika “mba hanaiky izay mikely aina eo amintsika sy mitondra antsika amin’ny Tompo ary mananatra antsika, ary mba hohajaina indrindra amin’ny fitiavana izy, noho ny asany” (1 Tesaloniana 5:12-13). Atsaharo ny fanakianana mandrava, ny fanambaniana, fa ny fankasitrahana, ny firahalahiana, ny fitiavana, ny fankatoavana no atao betsaka, mba ho “amin’ny fifaliana, fa tsy amin’ny fisentoana” no hanaovan’ireo “miambina ny fanahintsika” ny asany (Hebreo 13:17).
Mitodika amin’ny fontsika, aloha, ireo andinin-tSoratra Masina mikasika ny fanorenana ny Fanasàn’ny Tompo, ao amin’ny filazantsara telo voalohany sy ao amin’ny 1 Korintiana 11. “Naniry koa raha naniry” (Lioka 22:15) ny Tompo, mba hiara-mihinana farany ny Paska tamin’ireo mpianany; tsy dia noho ny maha-Paska azy, loatra, fa satria tamin’io fotoana io no tiany hanorenana ny Fanasàn’ny Tompo, izay hampahatsiahy ny olony, mandritra ny taona hifandimby, ny haben’ny fitiavany azy ireo. Ny fitenenana hoe “dieny mbola tsy mijaly Aho” sy “ny alina namadihana Azy” dia manamarika ireo fotoana handrenesana ilay Feo mamerina hoe: “izao no ataovinareo ho fahatsiarovana Ahy” (and 19). Dia tsy te hamaly miaraka amin’i Isaia ao amin’ny 26. 8 ve isika, hoe: “Ny Anaranao sy ny fahatsiarovana Anao no irin’ny fanahinay” ?
Nahoana moa ny Fanahin’Andriamanitra no mampiseho antsika ao amin’ny Lioka 22:24 ny fifandirana teo amin’ny apostoly mba hahafantarana “izay iray aminy hatao lehibe”, avy hatrany dia aorian’ny fanorenana ny Fanasàn’ny Tompo? Tsy efa fantatry ny Tompo mialoha ve, fa mandritra ny taona maro hifandimby, dia mbola hisy fifandirana toy izany eo amin’ireo olona na dia tia Azy aza, ary indrindra indrindra mikasika ny Fanasàn’ny Tompo? Tsy tiany hampahafantarina an’ireo olony ve ny fomba tokony hifampitondran’izy ireo? Marina fa tokony harovana ny marina, ary tokony hofadiana ny mampivaona na manova endrika ny fampianaran’ny Tompo, nefa toe-tsaina manao ahoana no tokony hanaovana izany? Izy ihany no manome antsika ohatra mavesa-danja tokoa, tamin’ny nilazany hoe: “Izaho dia eo aminareo toy izay manompo” (and 27). “Izaho izay Izy”, Tompo Andriamanitra, ilay Tsy miova, no teo afovoan’izy ireo. Fahasoavana tsy hita lany no nanetreny tena toy izany. Ary manoatra noho izany: tsy hoe tamin’ny fahefany rehetra sy ny voninahiny no naha-teo afovoan’izy ireo Azy, fa “toy izay manompo”. Tsy ohatra fanetrentena tokony hananantsika, manoloana izay rehetra momba ny fahatsiarovana ny nijaliany, ve, izany navelany ho antsika izany? fanetrentana tsy mifanohitra velively amin’ny fanarahana ny Teniny sy amin’ny ady ho amin’ny “finoana, izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an’ny olona masina” (Joda 3).
Fahatsiarovana ny fanafahana avy tany Egypta no nankalazan’ny Jiosy ny Paska. Izay Jiosy ara-pirazanana ihany, ary voafora sy tsy maloto, no nahazo nihinana ny zanak’ondry natsatsika tamin’ny afo (Nomery 9. 2-12). Raha nisy vahiny mba te hitandrina ny Paska koa, dia tsy maintsy voafora izy ary manaiky izay rehetra isarahan’ny Israelita amin’ny vahoaka hafa (and 14; Eksodosy 12:48).
Indray mandeha isan-taona no nanamarihana ny Paska; tsy misy fitsipika kosa ny momba ny fankalazana ny Fanasàn’ny Tompo, fa ny andro voalohany tamin’ny herinandro, ny harivan’ny nitsanganany tamin’ny maty, no nahatongavan’ny Tompo teo afovoan’ny olony, nampiseho azy ireo ny tànany sy ny lanivoany. Niandry valo andro indray izy, vao niverina toy izany. Ny andro voalohany amin’ny herinandro ihany koa no namakian’i Paoly mofo, niaraka tamin’ny mpianatra, tany Troasy (Asan’ny Apostoly 20:7).
Imbetsaka no miverina ao amin’ny Eksodosy sy any an-toeran-kafa ny filazana fa ny Paska dia Pask’i Jehovah. Ny 1 Korintiana 11:23-31 dia manipika fa ny Fanasana dia an’ny Tompo, eo no anambaràna ny nahafatesan’ny Tompo, eo no ahitana imaso ny tenan’ny Tompo, ny ran’ny Tompo, ny kapoaky ny Tompo. Tsy iadian-kevitra fa Izy no Mpamonjy, nefa ny zony amin’ny maha-Tompo Azy, ny voninahitra sy ny fahefana miaraka amin’izany, dia asongadina manokana ao amin’ny Fanasàn’ny Tompo.
“Ity no tenako”, hoy ny Tompo tamin’ireo mpianany nivory tao amin’ny efitrano ambony. Mety ho zavatra hafa ve ilay mofo, fa tsy mofo ihany, tamin’ny natolotry ny Tompo —izay mbola velona— an’ireo mpianany ary nolazainy hoe: “Ity no tenako”? Ary rehefa nitsangana tamin’ny maty i Jesoa, nampiakarina tam-boninahitra, ka azo atao hoe nanavao io fanorenana io tamin’i Paoly (“Izaho efa nandray tamin’ny Tompo izay natolotro anareo kosa”), tsy tany an-danitra ve ny tenany feno voninahitra sy natsangana tamin’ny maty? Ahoana àry no hahatonga ny mofo hanjary ny tenany ara-bakiteny? Raha mampiseho sary isika, ka milaza hoe: “ny raiko ity”, dia tsy misy olona mandray an’izany ho zavatra hafa. Rehefa miteny ny Tompo hoe: “ity no tenako”, dia milaza Izy izany fa ny mofo dia fanehoana ny tenany, ary ny divay dia fanehoana ny rany; nefa angamba mbola misy mihoatra noho izany: ho an’ny fanahintsika ary ara-panahy, ny mofon’ny Fanasàn’ny Tompo sy ny kapoakan’ny Tompo, ho an’ny finoantsika, dia “fiombonana amin’ny tena sy ny ran’i Kristy” (1 Korintiana 10:16).
”Na oviana na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan’ny Tompo ianareo” (1 Korintiana 11:26).
Tsara raha dinihina akaiky ny 1 Korintiana 10:14-22, ary jerena miaraka amin’ny teny eo alohany sy eo aoriany. Manomboka eo amin’ny toko faha-8, dia resahin’ny apostoly ny fanompoan-tsampy sy ny fanatitra ho an’ny sampy. Rehefa avy niresaka zavatra hafa isan-karazany izy, dia miverina amin’io ihany, ao amin’ilay andininy faha-14: “Koa amin’izany, ry malala, mandosira ny fanompoan-tsampy.” Omeny ao amin’ireo fehezan-teny manaraka ny antony tokony handosirana izany fanompoan-tsampy izany.
Iza no mendrika handray anjara amin’izany tsangambato fahatsiarovana izany? Tsy misy, raha ny tenantsika no dinihintsika; nefa tsy mendrika ny hotsarovana ve ny Tompo? Ny nanolorany ny tenany no nahavitany ny zavatra rehetra, ka “nahatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina” (Hebreo 10:14). Koa dia vokatry ny “fisasaran'ny fanahiny” (Isaia 53:11) sy ny “nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin’ny Malala” (Efesiana 1:6) no ahafahantsika manatona ny latabany.
Nefa misy toetra ara-panahy takiana amin’izany, araka ny anambaràn’ny 1 Korintiana 11:27-34 azy. “Aoka ny olona hamantatra ny tenany…”, mba hahalalàny ve raha mendrika izy? Tsia, fa “… dia aoka izy hihinana!” Rehefa mamantatra ny tenanao ianao, dia hahita fa tsy mendrika; ao amin’ny mazava no hahatonga anao hitsara ireo fahadisoanao sy hitsara ny tenanao; nefa eo koa no hahatsiarovanao fa efa nofafan’ny asan’i Kristy izany rehetra izany; hatoky ilay fampanantenana ianao hoe “raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra” (1 Jaona 1:9). Izany toetra izany no hihinanana ny mofo sy hisotroana amin’ny kapoaka, amin’ny fahatsiarovana ny fahasoavana izay hany mamela antsika handray anjara amin’io fanasana io.
Noho izany, dia heverina fa tsy tokony handray anjara amin’ny Fanasàn’ny Tompo ny ankizy kely, na dia an’ny Tompo aza. Mila fahaizana manavaka ny zavatra ara-panahy, “mandeha”, “mamantatra ny tenany”, ary “manan-tsaina” (1 Korintiana 10:15) hahalala izay ataony. Tsy hoe fahalalàna an-tsaina izany, fa kosa toetra ara-panahy afaka manavaka ny ratsy sy ny tsara.
Mazava fa ny voavotra ihany, ireo izay efa voasasa tamin’ny ran’ny Zanak’ondry, no asaina amin’izany tsangambato fahatsiarovana izany. Teo amin’ny fiantombohan’ny Asan’ny Apostoly, dia mazava ny fiovàm-po, mazava ny fisian’ny aina, hany ka tsy nisy fihambahambana mihitsy: ireo izay nandray ny Teny dia “nanampiana” fotsiny. Nefa hitantsika fa vetivety dia tafiditra ny ratsy, ary izany no nahatonga ireo fananarana isan-karazany. Ny 1 Korintiana 5 dia mampiseho antsika ny fomba tokony hanesorana ny ratsy; koa izay toy izany dia tsy mahazo mandray anjara amin’ny Latabatry ny Tompo: hitondra masirasira handoto ny fiangonana manontolo eo izy. Tsy ny haratsiana ara-panahy ihany no lazain’ny masirasira, fa ny haratsiana ara-poto-pampianarana koa, araka ny lazain’ny Galatiana 5:9. Izay tsy mitondra ny foto-pampianaran’i Kristy dia tsy azon’ny mpino nampandrosoana (2 Jaona 10-11). Koa akory, izany, no andraisantsika anjara amin’ny faharatsiany, raha maneho firaisana aminy eo amin’ny Latabatry ny Tompo isika! Nohazavain’ny 2 Timoty 2 tamintsika fa mandroso ny faharavana, ka tokony hiala amin’ny ratsy, aloha, isika (and 19), ary hanadio tena ho afaka amin’ny fanaka halaim-baraka (and 21), izay vao ho afaka miaraka amin’ireo izay miantso ny Anaran’ny Tompo amin’ny fo madio (and 22). Nametraka famerana ihany, izany, ny Tenin’Andriamanitra ka, na dia marina aza fa ireo rehetra isan’ny tenan’i Kristy dia manan-toerana eo amin’ny Latabatry ny Tompo, dia matetika misy sakantsakana tsy ahazoan’izany firaisana izany miseho.
Iza no hanapa-kevitra hitsara fa izay te handray anjara amin’ny famakiana ny mofo dia mahafeno ny fepetra takian’ny Tompo amin’izany? Tsy rahalahy iray, na rahalahy maromaro, fa ny fiangonana, izay nandray ny famehezana etỳ an-tany avy amin’ny Tompo (Matio 18:18). Raha ny fiangonan’i Jerosalema, aza, sahirana tamin’ny handraisana an’i Saoly raha tsy nanadihady ny amin’ny fiovàm-pony, aloha, mainka fa amin’izao andro izao, dia sarotra kokoa ny tonga dia hahafantatra hoe ity olona iray ity dia manaraka ny fampianaran’ny Tenin’ny Tompo, na eo amin’ny fiainany manokana na eo amin’ny fandraisana ny Fanasàn’ny Tompo. Tsy ny filazan’ny olona iray ihany no manaporofo fa manam-pinoana izy, fa ny asa vokatr’izany koa (Jakoba 2:18); mety hila fotoana maharitra vao ho hita mazava izany, ary toy izany koa ny hahafantarana fa tsy misy sakana toy izay voalaza terỳ ambony. Rariny, izany, raha misy ny fangatahana ho mpandray ny Fanasàn’ny Tompo, ankehitriny; ary hisy fotoana maharitraritra vao hazava amin’ny fiangonana ny amin’ny tokony handraisana ny mpino iray. Ny zava-misy, dia mety ho diso ny fiangonana, satria dodona loatra, na koa mitarazoka loatra. Nefa mandritra izay fotoana izay, ilay olona mangataka dia tokony handalina indrindra ny fampianaran’ny Soratra Masina momba ny Fiangonana sy ny Fanasàn’ny Tompo: raha tsy izany, dia rahoviana indray vao hanao izany? Rehefa resy lahatra ny fiangonana fa zanak’Andriamanitra ilay mpangataka, ary tsy misy sakana, dia manaiky azy araka izany. Koa dia handray ny Fanasàn’ny Tompo izy, tsy hoe satria “afa-panadinana”, na “tonga isan’ny fiangonana”, fa satria zanak’Andriamanitra, isan’ny tenan’i Kristy.
(*) Asainay manokana ianareo izay liana amin’io foto-kevitra io mba hamaky sy hamerina mamaky ny bokikely nosoratan’i J. N. Darby: “La discipline”. Ny toko momba ny fifehezana ao amin’ny asasoratr’i R.K. Campbell koa: “L”Eglise du Dieu vivant”, dia be fananarana amin’ny an-tsipiriany, momba io lohahevitra io.
Ny fifehezan’ny ray dia hampirisika, hanasa ny tongotra araka ny Jaona 13; hananatra araka ny 1 Timoty 5; hampitsangana araka ny Galatiana 6; hampitandrina araka ny 1 Tesaloniana 5:14.
Raha tsy ampy izany fifehezan’ny ray izany, dia manambara amintsika ny Teny mba hananatra eo anatrehan’ny olona rehetra: ho an’ny loholona, ao amin’ny 1 Timoty 5:20; ho an’ny olona mpanavakavaka, dia indroa miantoana, ao amin’ny Titosy 3. 10-11. Manoro ny fanalàna ireo tsy mitoetra tsara, ao amin’ny 2 Tesaloniana 3:6-15; ary mbola mafimafy kokoa noho izany aza, ho an’ireo mahatonga ny fisarahana sy fiandaniana, ao amin’ny Romana 16:17.
Raha fahadisoan’olon-tokana, dia ny Matio 18:15-17 no manoro antsika ny làlan-kaleha.
Misy faharatsiana mivandravandra, masirasira izay mandoto ny fiangonana manontolo (jereo Josoa 7). Koa tokony hanadio tena ny fiangonana, hanaisotra ny ratsy eo aminy; nefa alohan’izany, miaiky eo anatrehan’Andriamanitra ny faharatsiany ary “malahelo, mba hesorina tsy ho ao aminy ilay nanao izany zavatra izany” (1 Korintiana 5:2).
Ny fiangonana no mampihatra ny fifehezana, fa tsy rahalahy iray na maromaro, na dia efa nandinika mialoha ilay olana aza izy ireo. Amin’ny fahefany amin’ny maha-apostoly azy, dia afaka nitsara i Paoly hoe “hanolotra izany anankiray izany ho an’i Satana, hanimbana ny nofo” (1 Korintiana 5:5), nefa tsy izy no afaka hanaisotra ilay masirasira ela; ny fiangonan’i Korinto no tsy maintsy nanao izany. Izay ihany no azon’ny fiangonana atao; tsy anjarany ny manolotra ho an’i Satana.
Raha vao tapaka ny hevitra, izay manambara ny eritreritry ny fiangonana, dia eken’ny any an-danitra izany, araka ny Matio 18:18; azo ampiharina amin’ny fiangonana rehetra izany. Roa ny tanjona amin’izany: “mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy maha-misy masirasira anareo”; ary ilay nanao ratsy kosa, dia averina amin’ny toerany rehefa tena notsaraina tanteraka ny ratsy. Izany no ampianarin’ny 2 Korintiana 2:5-11 antsika. Eto koa, dia tsy afaka manao izany famerenana amin’ny toerany izany ny rahalahy iray na maromaro, na ny apostoly koa aza, fa ny fiangonana mihitsy no hany afaka “mamaha” izay efa “nofeheziny”.
Tena zava-doza sy mampalahelo tokoa, raha voatery ho tonga amin’izany dingana izany, ary matetika, tokony hanontany tena raha efa vita daholo ny ezaka tokony natao ampiharana ny fifehezan’ny ray sy ny fifehezana fanitsiana. Nefa raha tsy maintsy tonga tamin’izany fiafarana mampalahelo izany, dia tokony hanaraka koa ny fampianaran’ny Tenin’Andriamanitra: “mba tsy hiharoharoanareo aminy, ... aza miara-mihinana akory amin’ny toy izany ianareo” (1 Korintiana 5:11).
Mbola ilaina ampiana ihany ve, fa rehefa niasa ao an-tsaina sy ao am-po ny Fanahy, dia miova ny fitondrantena, ary hoy ny Teny: “aleo mamela heloka sy mampifaly azy kosa ianareo … mba hekenareo horaisina tsara am-pitiavana izy” (2 Korintiana 2:7-8)? Tsy tokony hanao ny fihetsik’ilay ray niandry fatratra ny fiverenan-janany ao amin’ny Lioka 15 ve isika, manoloana ny toe-javatra toy izany? Raha vao tazany “raha mbola lavitra izy”, dia onena azy izy ka nihazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Fahefana manokan’ny fahasoavana, izay te hampitsangana, hamerina, hamela heloka; ary rehefa tanteraka ny fampitsanganana, tsy miverina intsony amin’ny fahalavoana teo aloha.
Vakio Efesiana 5:22-32; Matio 13:45-46; Apokalypsy 19:7-9, 21 (*).
(*) Momba ny Efesiana 5, dia ampirisihina mafy ianareo hamaky ny pejy 313-323 ao amin’ny bokin’i J. N. Darby : “Etude sur la Parole” mikasika ny Efesiana; anisan’ny pejy tsara indrindra nosoratan’io mpanompon’Andriamanitra io izany.
Ny Apokalypsy 19:7-9 dia mampiseho antsika ny azo atao hoe sary voalohany momba io fiangonana be voninahitra izay horaisiny ho an’ny tenany io, tahaka ny filazan’ny Tononkiran’i Solomona 3. 11 hoe “tamin’ny andro nifalian’ny fony”. Mandray ny valin’ny “fisasaran’ny fanahiny” (Isaia 53:11) sy ny fitiavany ny Zanak’ondry, rehefa avy nijaly fatratra.
“Efa niomana ny vadiny.” Hevitra roa no azo tsoahina amin’izany teny izany. Ny fanasana fampakarambady any an-danitra dia mifanaraka amin’ny Fanasàn’ny Tompo etỳ an-tany. Ho fiomanana amin’ny Fanasàn’ny Tompo, dia tsy maintsy mandini-tena, ary alohan’ny handraisana anjara amin’ny fanasana any an-danitra, dia tsy maintsy mandalo amin’ny tribonalin’i Kristy: tsy hohelohina tsy akory, fa mba haseho mazava izay rehetra nataontsika tao amin’ny tena, na tsara na ratsy; mba ho levona avokoa izay rehetra mombamomba antsika; izay vao ho azontsika tanteraka ny hasarobidin’ny ra, izay namafa ny zava-drehetra; tsy hisy aloka intsony manelanelana antsika amin’ny Tompontsika. Fiomanana tsy maintsy atao sy mahagaga tokoa, mba ahafahantsika misitraka tanteraka ny fitiavany. Amin’izany “fiomanana” izany, nefa, dia misy hevitra mifandrindra amin’ilay fitafiana rongony fotsy madinika, izay “asa marina ataon’ny olona masina”. Tsy io ilay fitafiana hanamarinana nomen’Andriamanitra ao amin’i Kristy, fa fitafiana namboarintsika tsikelikely tetỳ an-tany: izay fihetsika rehetra, izay teny rehetra, izay fitondrantena rehetra nataontsika, toy ny vokatry ny fiainana avy amin’Andriamanitra, dia kofehy iray amin’izany akanjo izany, amboradara iray amin’izany. Be ny zavatra eritreretin’ny fofombady manomana ny akanjony toy izany! Faly tokoa izy mieritreritra ny andro hisalorany izany eo anilan’ny vadiny! Manazava ny toetra mahatokin’ny Tompo etỳ an-tany izany: tsy hoe fanoavana didy ara-dalàna, fa hetahetan’ny fo “hanaovana ny sitrapony amin’ny zavatra rehetra” (Kolosiana 1:10), “mamantatra izay ankasitrahin’ny Tompo” (Efesiana 5:10), “mitandrina tsara izay fandeha” (and 15), noho ny fitiavana Azy.
Mifanohitra tanteraka amin’ilay vehivavy janga ao amin’ny toko faha-17 izany. Nentina tamin’ny Fanahy “tany an’efitra” i Jaona, mba hahita azy: tany tsy misy na inona na inona ho an’Andriamanitra. Fa mba hahitany kosa ilay tanàna masina, dia nentina “ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo” izy. Lavitra izao tontolo izao, lavitra ny fisafotofotoany, lavitra ny fitsiriritany, lavitra ny zava-manahirana azy. Tahaka ilay Tompo nietry fahiny, niova tarehy teny “an-tendrombohitra avo” (Matio 17:1), izay nahitan’ny mpianany ny voninahiny.
“Midina” ny tanàna masina. Ny apostoly Paoly dia mampiseho antsika olona maty ao amin’ny hadisoany sy ny fahotany, na miaina ao anatin’ny fahotany, izay esorin’Andriamanitra amin’izao tontolo izao, avotany, velominy, atsangany tamin’ny maty, ary apetrany ao amin’ny Kristy any an-danitra. Amin’ny voninahitra no hanalana ny fiangonana teto amin’izao tontolo izao. Mifanohitra amin’izany kosa, ny apostoly Jaona dia milaza antsika momba ny Teny, izay tao amin’Andriamanitra, tonga nofo ary nonina tamintsika. Lazainy antsika ao amin’ireo epistiliny ny fivelaran’ny toetran’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao; eto kosa izy dia mampiseho ny fiangonana midina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, mba hamerin-taratra ny fahazavana —ny tara-pahazavan’ny voninahitr’i Kristy— mandritra ny fanjakàny (2 Tesaloniana 1:10).
Manambara Azy avokoa ny zava-drehetra ao amin’ilay tanàna; ny vato jaspy: Andriamanitra miseho amin’ny voninahiny; ny vatosoa sarobidy samihafa: ny voninahitra samihafan’i Kristy; ny vavahadin’ny tanàna: pèrila mampahatsiahy ny hasarobidin’io fiangonana io eo imasony. Tsy misy afa-tsy fahadiovana, fangaraharana sy fahazavana; “ny voninahitr’Andriamanitra no nanazava azy, ary ny Zanak’ondry no fanazavana azy” (Apokalypsy 21:23).
Nefa erỳ am-parany, dia mbola misy fampitandremana manetriketrika ihany, eo amin’ny andininy faha-27: “Tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga.” Iza, izany, no ho tafiditra ao amin’io tanàna masina io? “Izay voasoratra ao anatin’ny bokin’ny fiainana … ihany, izay nanasa ny akanjony, izay nanasa izany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry” (Apokalypsy 21:27; 22:14; 7:14).
Ao amin’ny mandrakizay, dia hitantsika indray fa “nidina” ny fiangonana, toy ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny, tanàna masina, Jerosalema vaovao. Inona no antony? “Indro, ny tabernakelin’Andriamanitra dia eo amin’ny olona, ary Izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra ao aminy, dia ho Andriamaniny” (Apokalypsy 21:3). Rehefa izany, dia “tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany” (1 Korintiana 15:28). Very tamin’ny fahalavoana ny fanatrehan’Andriamanitra; nisy ampahany hita ihany, tao amin’ny tabernakely, avy eo dia tao amin’ny tempoly, ary ao amin’i Jesoa no amirapiratan’izany etỳ an-tany; hita kokoa ao amin’ny fiangonana, ary ho fitahiana mandrakizay ho an’ny olona rehetra honina ao amin’ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, izany fanatrehan’Andriamanitra izany.
Miresaka farany ny ampakarina ny Tenin’Andriamanitra, hoe: “Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia” (Apokalypsy 22:17). Hifarana ilay Boky Masina, nefa mbola misy hiaka ihany hoe: “Avia”. “Amen, avia Jesoa Tompo!”